Manoratra ho anay - Victor Mochere
Ny blaoginay dia tranokalam-baovao, fa tsy fifosana na vaovao. Ny tena ifantohan'ity tranonkala ity dia ny fahazoana fampahalalana betsaka amin'ny aterineto. Fampahalalana izay hahitan'ny mpamaky azy na dia folo taona monja aza. Raha te-hamoaka lahatsoratra ianao victor-mochere.com, mila manamarina raha mahafeno ireto fepetra manaraka ireto ianao, vakio amim-pitandremana azy ireo.
Ahoana no hizarana ao amin'ny bilaoginay
Tena mora tokoa izany, mila manatanteraka ireo fepetra ireo ianao. Tianay ny hitazona tranokala tsara tarehy, manaraka ny format straténa sy ny votoatiny mifampiankina amin'ny fomba iray natao hampahafantarana ny mpanatrika
1. Length - Teny 500 farafaharatsiny na mihoatra
2. originality - Ny hafatrao dia tsy maintsy miavaka, tena izy ary tsy apetraka amin'ny toeran-kafa
3. structure - Manaova fampidirana, vatana ary raha azo atao, famaranana. Ny atiny azo apetraka, azafady amin'ny endrika latabatra
4. sary - Ny lahatsoratra rehetra dia tsy maintsy manana sary asongadina mazava sy tsara. Mampiasa 1000 px amin'ny 500 px izahay
5. Rohy sy referins - Azafady mba ampiasao ny fanondroana raha toa ka olon-kafa ny loharanom-baovao
6. Title - Manana lohateny mahasarika sy azo ampiharina izay afaka misarika ny sain'ny mpamaky mora foana
7. Relevancy - Ny hafatrao dia tsy maintsy tafiditra ao amin'ny sokajy 10; Harena, orinasa, fanabeazana, fitsangatsanganana, teknolojia, fiainana, fialamboly, politika, fanatanjahan-tena ary fiainana an-tany
8. Quality - Zahao ny tononao sy ny fitsipi-piteninao. Aza atao hadisoana mihitsy
9. Curation - Ny lahatsoratrao dia tsy maintsy dinihina tsara ary miorina amin'ny zava-misy. Tsy manaiky eritreritra na hevitra izahay
10. mampanankery - Hamarino tsara fa maharitra mandritra ny fotoana maharitra ny lahatsoratra alefanao
11. SEO - Hamarino tsara fa nohatsaraina ny lahatsoratrao SEO, ohatra, ny lohateninao dia tokony ho latsaky ny 60 litera, soso-kevitra ny teny lakile, ny sary dia tokony hofehezina amin'ny endrika jpg, sns.
Izay tsy ekentsika
Mitaky ezaka sy fotoana hamokarana lahatsoratra tsara. Noho izany, aza misalasala manoratra lahatsoratra iray eto ambany.
a. Izay rehetra raketina ity blôgy ity taloha
b. Izay rehetra fampiroboroboana loatra
c. Izay rehetra tsy ampy ny voalaza etsy ambony
d. Izay rehetra toa manambany na tsy marina
e. Sarotra ny mamaky sy sarotra ny mahatakatra ny soratra
f. Izay zavatra tsy dia misy fikarohana
g. Izay rehetra saro-pady
h. Izay zavatra rehetra mifototra amin'ny fanombatombanana fotsiny na asa mihevitra
i. Izay rehetra manosika ara-politika na mifandrindra
Inona no hitranga taorian'ny nandefasanao ny mailaka?
Hovakiantsika tsara ny fandefasana anao ao anatin'ny herinandro ary hamaly anao. Raha mendrika ny fanoloranao, alohan'ny hamoahana azy, dia hangataka anao izahay hamorona kaonty amin'ny tranokalanay miaraka amin'ny antsipiriany feno, satria izahay hanome anao ny voninahitra amin'ny lahatsoratrao. Hampahafantarina anao rehefa navoaka ny lahatsoratrao. Raha misy zavatra tsy ampy na raha tsy afaka mametraka ny fandefasanao izahay dia hampahafantatra anao izahay araka izany.
Fanamarihana: Raha mikasa ny ho tonga mpandray anjara maharitra eo amin'ny tranokalantsika isika dia mahazoa anay amin'ny alalanay fifandraisana pejy. Raha tsy izany dia alefaso amin'ny alàlan'ny endrika etsy ambany ny fandefasana anao.
Loharano loharano, raha misy
Ampitahao ny fanekenao amin'ireo fepetra takiana
Manamafy aho fa efa namaky sy nahatakatra ireo fepetra etsy ambony aho, ary ny fanontaniako dia mifanaraka amin'ireo torolalana voalaza rehetra.